Magaalo in Awdal, SomaliaTemplate:SHORTDESC:Magaalo in Awdal, Somalia
Meesha ka dhacdo Soomaaliya.
Xariirad (Af Ingiriis : Harirad) waa magaalo ku taala waqooyigalbeed gobolka Awdal, wadanka Soomaaliya. Magaaladani waxay ku taala deegaano ka tirsan banka Geriyaad ee dhexmara waqooyiga gobolkaasi. Intaas waxaa dheer, magaaladani waxay dhacdaa wadada iskuxidha magaalada Boorama iyo wadanka Djibouti. Magaalada Xariirad waxay dhacdaa 150 kilomitir koonfurta magaalda Saylac iyo 3 km (2 mi) waqooyiga xadka wadanka Itoobiya. Intaas waxaa dheer, magaaladani waxay leedahay joog dhan 972 mitir biyaha bada ka kor, waxaana ku hareersan buuro waaweyn oo ka mid ah Silsilada Golis. Juquraafi ahaan magaaladan waxay ka tirsan tahay Degmada Saylac, waxay marar badan si toos ah u hoostegtaa Maamulka Saylac & Lughaya.
Magala-Cad Archived Maarso 22, 2012 // Wayback Machine
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xariirad&oldid=235421"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 May 2022, marka ee eheed 07:11.